Cunto: Waxyaabaha lagama maarmaanka ah in laga reebo dhammaan cinwaanka IP-yada
Waa dabeecadda aadanaha. Taasi waa sababta ay u muuqato in qaar ka mid ah waxyaabaha loo baahan yahay in la sameeyo waqti hore halkii ay ka dambayn lahaayeen, weli waxay dib u dhigayaan. Si kale haddii loo dhigo, dib-u-dhiska wuxuu had iyo jeer ku guuleystaa. Marka laga reebo dhamaan cinwaanada IP-ga dibadda ayaa muhiim ah gaar ahaan marka la macaamilayo barta bilowga ama bogga. Haddii aad rabto nidaam siman oo hufan, markaa waa in aan la iska indha tirin. Dhammaan isku mid, waxay leedahay laba qalab. Marka hore, taraafikadani waxay qeexayaan xog muhiim ah sida tirada aragtiyada bogga iyo wakhtiga ku baxaya bogga internetka. Marka labaad, waxay hoos u dhigeysaa heerka sare u qaadista inta la kordhinayo inta jeer ee soo noqnoqodayaasha (isticmaala).
maaddaama maamulayaasha websaydhku ay u isticmaalaan xogtan si ay u falanqeeyaan iyo hagaajinta, waxaa jira baahi ah inaadan joojin cinwaankaaga IP. Wax kasta oo ka soo horjeeda tani waxay ku dheehan tahay awoodaada inaad ku qaadato fikrado qaali ah - laga soo bilaabo falanqaynta.
Waa hagaha Frank Abagnale, oo ah Semt Maamulaha Guusha Macaamiisha, sida looga reebayo cinwaanka IP-ga Google Analytics
Tallaabada koowaad: go'aaminta cinwaankaaga IP
Talaabadani waa mid toos ah, Google waa uu jiraa in uu ku caawiyo Qeyb ka mid ah calaamadaha IP-ga waxa la arki doonaa natiijooyinka sanadaha soo socda, iyo natiijooyinka ugu sareysa, waxaad arki doontaa IP
Tallaabada labaad: u gudub wareegtooyinka
Tani waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Tag Google Analytics oo geli xisaabtaada. Markaad gasho, waa inaad awood u yeelatid inaad aragto Aqalka Aqoonsiga.
riix 'Admin' tag meel sare ee navigation navigation. Tani waxay kuu geyneysaa shaashad kale
ka dib talaabada kor ku xusan, dooro koontada hoosta kuugu jirta kaas oo caan u ah
tilmaan iyo dooro domain (hanti) aad rabto inaad ka saarto warbixintaada falanqaynta
dooro mid ka mid ah muraayadaha lagu calaamadeeyay filtarrada ka dibna abuur hal (ku dar sham cusub).
Tilaabada saddexaad: Isticmaalidda santuuqa
Marka aad u maleynaysid in aadan sidaan sameynin kahor, fiiri kuwa soo socda:
abuur shey cusub oo loogu talagalay profile
ka fekeraan nooc kale oo sahlan si loo xasuusto magaca shayga. Iskuday wax sida IP-yada la xiray
dooro filimka horay loo yaqaan 'filter' ka dibna u gudub talaabada xigta
isbeddel ku samee liiska labaad ee hoos ku qoran sida ay u akhriso 'taraafikada cinwaanka IP'
furaha cinwaanka IP-gaaga sida aad u aragtay sida lagu muujiyey bilowga tilmaamahan.
Keydso bedel, adigana waad fiican tahay inaad tagto
Waa wax fudud. Hadda oo aad ka taxadartey arrintan, waxaad ku jirtaa xoriyad si aad uga dhex socoto websaydhkaaga iyada oo aanad ka walwalsanayn wax walwal ah warbixinta Analytics / xogtaada. Sidee ku sahlanaantaada? Qiimaha laga saarayo cinwaanka IP-da ee Google Analytics waa mid fudud oo uma baahna inaad noqoto guru farsamo. Kaliya raac tallaabooyinka ku qoran, oo aad samaysay:
Hal talaabo - u ogolow Google inuu kaa caawiyo aqoonsigaaga IP
Tallaabada Labaad - ku socda macaamiisha xisaabtanka iyo sameynta sifeyn habboon
Tilaabada sadexaad - waxaad u bedeshaa filter-kaaga si aad uga baxdo IP-gaaga oo aad badbaadiso dhammaan isbeddellada Source .